Iindaba-Umatshini oMatshini oMveliso oZenzekelayo oMtsha weHeparin Cap
Umatshini oMatshini oMatshini oMveliso oZenzekelayo weHeparin Cap
Njengoko sonke sisazi, iSayensi kunye netekhnoloji iya kuba yeyona nto iphambili kwimveliso kwi-21 century. IHuaian Medicom Medical Technology Co, Ltd ihlala ilandela ukukhula kwamaxesha. Nge-17 kaJulayi ka-2018, i-Huaian Medicom Medical Technology Co, Ltd ithenge umatshini wemveliso ezenzekelayo ye-heparin cap. Ziindaba ezimnandi kuwo onke amalungu e-Huaian Medicom Medical Technology Co, Ltd. Zintathu iimpembelelo ezilungileyo ezisebenzayo, umgangatho kunye nokunciphisa iindleko zabasebenzi.
Okokuqala, umatshini omtsha wokuzenzekelayo we-heparin unokusebenza okuphezulu kunencwadana yemigaqo. Isiciko seHeparin sihlala siyimveliso ethandwa kakhulu kwinkampani yethu, ke yayihlala ijongana nombuzo omnye wokuba ibango lingaphezulu kokubonelelwa. Kodwa ngoku Yonke ingxaki ilungisiwe, umatshini omtsha wokuzenzekelayo we-heparin 20 ixesha elifanelekileyo kunangaphambili, eligcina ixesha elininzi lomsebenzi wethu. Kungenxa yokuba kufuneka umntu omnye asebenzise lo matshini, ke omnye umsebenzi unokuhlawula ngakumbi ezinye izinto.
Okwesibini, umatshini omtsha wokuvelisa ngokuzenzekelayo we-heparin cap ikwabonelela ngemveliso esemgangathweni ophezulu. Isiphumo esinye senzuzo kumatshini ngumatshini ongaziyo ukuba udiniwe kwaye umatshini akaze enze mpazamo ngaphandle kokuba waphukile. Ngemihla yakudala, inkampani yethu kufuneka ichithe imali ikhefu lezinto ezithile ezingezizo, kodwa ngoku abasebenzi kufuneka babeke izinto ezingafunekiyo emshinini, vula ezantsi, emva koko ikepusi esemgangathweni ye-heparin ikulungele ukusetyenziswa.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, umatshini omtsha wokuzenzekelayo unciphisa iindleko zabasebenzi. Kuyinyani ekufuneka siyazi ukuba umatshini uthatha indawo yomntu. Isenokungabi ziindaba ezimnandi kuye wonke umntu, kodwa iyanceda ngokwenene inkampani ukuba icwangcise izibonelelo ngokufanelekileyo, oko kuthetha ukuba inkampani inokusebenzisa imali eyongezelelweyo ukonyusa umgangatho wemveliso, kwaye inkampani inokusebenzisa imali eninzi ukufunda itekhnoloji entsha. Luhlobo lwenkohlakalo, kodwa luphuhliso lwamaxesha.
Ixesha Post: Jul-17-2018
Ityhubhu yokondla iintsana, Ukulungiswa kotywala, Ubungakanani beBlade yoPhando, Utywala Pad, Ukufunxa iCatheter, Iv Catheter,